Maxay tahay sababta ay Dowladda Soomaaliya uga noqotay xiriirkii ay u jartay Kenya? | Biyoguurenews.com
Home Wararka Maxay tahay sababta ay Dowladda Soomaaliya uga noqotay xiriirkii ay u jartay...
Wasiir ku xigeenka warfaafinta Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala
Wuxuu go’aankaas yimid markii ay Soomaaliya soo saratay eedeymo ay ugu jeedisay Kenya in ay faro galin ku heyso arrimaha gudaha ee dalkeeda iyo inay soo abaabuleyso kooxo hubeysan.
Isla su’aashaas ayuu wasiir ku xigeenka uga jawaabay: “Arrintan markii horeba ma ahayn dookh iska yimid, waa la ogyahay duriifihii keenay in Soomaaliya ay joojiso xiriirkii diblomaasiyadeed ee Kenya ay la lahayd. dowladdu waxay arrintan ku baddalatay markii la xaqiijiyay in la joojiyay, la iskuna afgartay in la joojiyo dhammaan ficilladii iyo arrimihii keenay in dowladda Soomaaliya ay joojiso cilaaqaadka ay la lahayd Kenya.”
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaas sii raaciyay: “Mar haddii dhibaatooyinkii jiray ay meesha ka baxeen, sida ku qoran war murtiyeedkana la isku afgartay in la is ixtiraamo, daris wanaag lagu wada noolaado, danaha labada waddanna laga wada shaqeeyo, sidaas ayuu ku yimid go’aankan.”
Bogga Twitter-ka ee madaxtooyada Kenya ayaa maanta lasoo dhigay sawirro muujinaya in Amiirka qadar uu booqday Kenya, uuna la kulmay madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Previous articleKornayl Doolaal muxuu Xabsiga kala kulmay
Next articleHabar Jeclo hadaynu nahay Dekadan Waynu dhisanaynaa, Halkani XIIS waa halkii ay ka Unkameen habar jeco dibna waynu ugusoo noqonaynaa,